Shiinaha warshad caday dhuxul-dhuxul warshad iyo soosaarayaasha | Enyuan
Cadayga dhuxusha ee bamboo ayaa loogu magac daray ka dib markii lagu daray dhuxusha bamboo ee ku duugan. Midabku wuu ka duwan yahay cadayga dhaqameed. Sababtoo ah barafka waxaa lagu daraa dhuxusha bamboo C ion firfircoon oo laga soo saaro dhuxusha bamboo, midabku waa madow dabiici ah. Tikniyoolajiyaddan ayaa la aqoonsaday. Waxaa loo adeegsaday caday si loo xakameeyo neefta iyo dhibaatooyinka kale ee afka.
magaca sheyga caday dhuxusha dhuxusha
Qalabka birta Duubista dhuxusha bamboo
Caday qalabka wax lagu maareeyo pp + tpr
0.18mm Timo jilicsan oo jilicsan
Madaxa buraashka ee si taxaddar leh loo xushay, oo leh fiilooyin gaagaaban, ayaa nadiifinaya farqiga u dhexeeya ilkaha, oo leh dusha sare ee qalooca, oo keenaya khibrad cusub oo ku saabsan nadiifinta ilkaha
Dhuxusha bamboo tayo sare leh ayaa lagu farsameeyaa budo wanaagsan, taas oo leh awood xayeysiin xoog leh waxayna soo jiidan kartaa haraaga cuntada iyo urta. Si dhakhso leh ayey u engejin kartaa xajmiga, u ilaalin kartaa nadiif, ammaan iyo nadaafad
Midabku wuu ka duwan yahay cadayga dhaqameed. Sababtoo ah buraashka waxaa lagu daraa dhuxusha bamboo C ion firfircoon oo laga soo saaro dhuxusha bamboo, midabku waa madow dabiici ah, taas oo ah mid gaar ah oo shakhsiyad buuxda.
Dhuxusha Bamboo C ion firfircoon waa heer sare dheemman heer sare ah oo heer C ah oo qaab dhismeedka shabakadeed laga soo saaray dhuxusha bamboo ka hooseysa heerkulka sare iyo cadaadiska sare, waxayna adeegsadaan tikniyoolajiyad casri ah si ay isugu darsadaan dhuxusha bamboolaha C ion firfircoon leh bir si ay u soo saaraan xayeysiin aad u sarreeya, qoyaan caabbinta, xakamaynta qoyaanka iyo awoodda bakteeriyada, waxay sidoo kale sii deyn kartaa fallaadho infrared fog iyo ion oksijiin taban. Waxaa loo yaqaanaa ilaaliyaha caafimaadka ee qarniga 21aad. Waxaa si weyn looga isticmaalaa meelo badan oo ka mid ah nolol maalmeedka dadka.
Dhexroorka ugu sarreeya ee cirridku waa 0.18mm, 8, kaas oo si fiican u nadiifin kara cirridka ilkaha iyo kalagoysyada ilkaha ee aan la heli karin burushka cadayga caadiga ah, si tartiib ah uga qaad kalkulaska ilkaha iyo ilkaha ilkaha, hagaajinta awoodda nadiifinta burushka cadayga, yareynta heerka dhacdooyinka ee 'periodontitis', oo ha yeelin dhaldhalaalka dusha ilkaha, si loo ilaaliyo caafimaadka iyo nadaafadda ilkaha.
Nidaamka cadayashada ilkaha sidoo kale waa geedi socodka si tartiib ah loogu ciribtiro ciridka cirifka sare ee nabarada yar yar. Marka loo barbardhigo cadayga caadiga ah, cadayga dhuxusha ee bamboo wuxuu yareyn karaa cadaadiska cirridka wuxuuna yareyn karaa ifafaalaha casaanka cirridka iyo bararka.
Hore: buraash jilicsan oo jilicsan caday madaxa burush yar
Xiga: Qoyska cadayga ciridka ee ciribtirka antibacterial house
Burushka ilkaha ee lidka ku ah bakteeriyada
Cadayga Dhuxusha Dhuxusha La Difaacayo
Bamboo cadayga lidka bakteeriyada